China Liquid Oxygen na Nitrogen Production Plant / Liquid Oxygen Generator Generator na ngwaahịa na Ma ọ bụ
Oxygen Liquid na Nitrogen Production Osisi / Liquid Oxygen Generator
Anyị maara na anyị ikenyeneke mbiet engineering nka na echepụta mmiri mmiri oxygen osisi nke na-adabere cryogenic distillation technology. Nkọwapụta anyị nke ọma na-eme ka usoro gas nke ụlọ ọrụ anyị nwee ntụkwasị obi ma rụọ ọrụ nke ọma na-akpata obere arụmọrụ arụmọrụ. N'ịbụ ndị e ji ihe na ihe ndị dị elu mepụta ya, osisi oxygen anyị mmiri mmiri na-adịru ogologo oge chọrọ mmezi kacha nta. Maka nrube isi anyị na njikwa njikwa njikwa ike, enyerela anyị asambodo ndị asambodo dịka ISO 9001 ， ISO13485 na CE.
1.Air Nkewa Unit na nkịtị okpomọkụ molekụla sieves ọcha, booster-turbo expander, obere nrụgide ndozi kọlụm, na argon mmịpụta usoro dị ka ndị ahịa chọrọ.
2.Dị ka ngwaahịa a chọrọ, mkpakọ mpụga, mkpakọ dị n'ime (mmụba ikuku, mmụba nitrogen), nrụgide onwe onye na usoro ndị ọzọ nwere ike ịnye.
3.Blocking nhazi nke ASU, ntinye ngwa ngwa na saịtị.
4.Extra obere nsogbu usoro nke ASU nke belata ikuku Compressor iyuzucha nsogbu na-arụ ọrụ na-eri.
5.Advanced usoro mmịpụta argon na mmịpụta argon dị elu.
Air Compressor: Ikuku na abịakọrọ na a ala nsogbu nke 5-7 mmanya (0.5-0.7mpa). A na-eme ya site na iji compressors kacha ọhụrụ (rewgha / Centrifugal Type).
Usoro nke jụrụ oyi: Agba nke abụọ nke usoro a gụnyere iji refrjiraeto maka izipụ ikuku ikuku esichara na gburugburu 12 deg C tupu ya abanye na nzacha.
Ọcha nke ikuku site na nhicha: Ikuku na-abanye na nchacha, nke mejupụtara ejima molekụla Sieve driers nke na-arụ ọrụ ọzọ. Mkpụrụ Molekụl na-ekewa carbon dioxide & mmiri si n'usoro ikuku tupu ikuku erute na nkewa ikuku.
Cryogenic Cooling of Air Site Expander: Ikuku ga-mma sub sub okpomọkụ maka liquefaction. A na-enye friji refrigion na jụrụ site na turbo nke ọma nke ọma, nke na-eme ka ikuku dị elu n'okpuru -165 ruo-170 deg C.
Nkewa nke Liquid Ikuku n'ime Oxygen na Nitrogen site Air Nkewa Kọlụm: Ikuku nke na-abanye na ala nsogbu efere fin ụdị okpomọkụ Exchanger bụ mmiri n'efu, free mmanụ na carbon dioxide free. Ọ na-mma n'ime okpomọkụ Exchanger n'okpuru sub efu okpomọkụ site ikuku mgbasa usoro na expander. A na-atụ anya na anyị ga - enweta ihe dị iche na Delta dị ka 2 Celsius ogo na njedebe na - ekpo ọkụ nke ndị na - agbanwe ego. Ikuku Liquefied mgbe ọ ruru na ikuku nkewa kọlụm na kewara n'ime oxygen na nitrogen site na usoro nke ndozi.
A na-echekwa Oxygen Liquid na Tank Nchekwa Liquid: A na-ejupụta oxygen Liquid n'ime tank nchekwa mmiri nke ejikọrọ na mmanya na-egbu egbu na-akpụ usoro akpaka. A na-eji paịpụ sooks na-ewepụ oxygen oxygen mmiri na tank.
Nke gara aga: Cryogenic type mini scale ikuku nkewa osisi ulo oru oxygen generator nitrogen generator argon generator
Osote: Osisi Nitrogen Liquid osisi Liquid Gas, Osisi nitrogen dị ọcha na tankị
Liquid Oxygen akụrụngwa
Onsite nitrogen mbukota igwe nri indust ...
Uru nke ngwaahịa Anyị na-ewukwasị osisi oxygen maka silinda na-ejupụta ihe kachasị mma na akụrụngwa. Anyị na-ahazi osisi dị ka ihe ndị ahịa chọrọ na ọnọdụ mpaghara. Anyị na-apụta n'ahịa gas na-emepụta ihe na-enye anyị ngwakọta kachasị mma nke ụgwọ na arụmọrụ anyị. N'ịbụ ndị na-akpaghị aka, osisi ahụ nwere ike ịgba ọsọ n'enweghị nchedo ma nwekwara ike ...